1 Tantara 16 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 16
Filaharan'ny fanompoam-pivavahana - Hira fiderana.
1Nony efa voampiditra ny fiaran'Andriamanitra sy efa napetraka tao afovoan'ny lay naorin'i Davida ho azy, dia nanatitra sorona dorana sy sorom-pihavanana teo anatrehan'Andriamanitra ny olona. 2Nony vitan'i Davida ny fanolorana ny sorona dorana sy ny sorom-pihavanana, dia nitso-drano ny vahoaka tamin'ny anaran'ny Tompo izy. 3Ary ny olona rehetra tamin'Israely na lahy na vavy, dia nizarany mofo iray avy, sy hena iray didy ary ampempam-boaloboka iray.
4Nisy Levita sasany notendren'i Davida hitoetra eo anatrehan'ny fiaran'ny Tompo mba hanao ny fanompoana amin'ny fangatahana, fankalazana sy fiderana an'ny Tompo Andriamanitr'Israely; 5dia Asafa filohany, Zakaria faharoa, dia Jahiela, Semiramota, Jehiela, Matatiasa, Eliaba, Banaiasa, Obededoma ary Jehiela, izay nanan-java-maneno, lokanga, harpa, ary Asà nampaneno ny kipantsona, 6Banaiasa sy Jaziela mpisorona nitsoka anjomara lalandava, teo anoloan'ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra.
7Tamin'izay andro izay no voalohany nanapahan'i Davida, fa ny feon'i Asafa sy ny rahalahiny no hankalazana an'ny Tompo:
8Midera an'ny Tompo; miantsoa ny anarany;
ampahafantaro ny firenena ny zava-dehibe nataony.
9Manaova hira fanajana azy, mihira salamo fanajana azy.
Torio ny fahagagana rehetra nataony.
10Ataovy reharehanareo ny anarany masina; a
Aoka ho faly ny fon'izay mitady an'ny Tompo.
11Katsaho Iaveh sy ny heriny,
tadiavo lalandava ny tavany.
12Tsarovy ny zava-mahatalanjona nataony,
ny fahagagany sy ny fitsaran'ny vavany,
13ry taranak'Israely mpanompony,
ry terak'i Jakoba, hianareo olom-boafidiny.
14Izay Iaveh no Andriamanitsika,
mahazo ny tany rehetra ny fitsarany.
15Tsahivo mandrakariva ny fanekeny,
ny teny nataony ho an'ny taranaka arivo mandimby.
16Ny fanekena nifanaovany tamin'i Abrahama,
ny fianianana nataony tamin'Isaaka,
17izay naraikiny ho lalàna ho an'i Jakoba,
ary ho fanekem-pihavanana mandrakizay ho an'Israely,
18nataony hoe: Homeko anao ny tany Kanaana,
ho anjara lovanao.
19Fony mbola mora isaina hianareo,
vitsy isa, sady vahiny tamin'ny tany,
20nivezivezy nifindra firenena izy ireo,
avy amin'ny fanjakana iray ho amin'ny vahoaka hafa,
21tsy navelany hisy hampahory azy,
fa izy ireo aza namaizany mpanjaka:
22aza mitendry ireo voahosotro,
aza manisy ratsy ny mpaminaniko.
23Mihira ho an'ny Tompo, ry mponina amin'ny tany rehetra;
torio isan'andro ny famonjeny.
24Ambarao amin'ny firenena ny voninahiny
ary amin'ny vahoaka rehetra ny fahagagany.
25Fa lehibe Iaveh ka mendrika hoderaina indrindra,
ary mahatahotra mihoatra ireo andriamanitra rehetra izy;
26fa ny andriamanitry ny firenena rehetra dia sampy.
Ary Iaveh no nanao ny lanitra;
27fiandrianana amam-pamirapiratana no eo anatrehan'ny tavany,
ary hery aman-kafaliana no eo amin'ny fonenany.
28Omeo an'ny Tompo, ry fianakaviam-pirenena,
omeo an'ny Tompo ny voninahitra sy ny fahefana;
29omeo an'ny Tompo ny voninahitra ho an'ny anarany.
Mitondra fanatitra ka mankanesa eo anatrehany;
mitsaoha an'ny Tompo amin'ny fanamiana masina.
30Mangovìta eo anatrehany, ry mponina amin'ny tany rehetra,
ary izao tontolo izao, voaorina, tsy mba hivembena.
31Aoka hifaly ny lanitra,
ary aoka hiravo ny tany!
Aoka holazaina eram-pirenena ny hoe: Mpanjaka Iaveh!
32Aoka hirohondrohona ny ranomasina, mbamin'izay rehetra ao aminy!
Aoka hisomebiseby ny saha, mbamin'izay rehetra ao aminy!
33Ary aoka hanandra-peo fifaliana ny hazo an'ala,
eo anatrehan'ny Tompo fa avy hitsara ny tany izy.
34Midera an'ny Tompo fa tsara izy,
35Lazao hoe: Vonjeo izahay, ry Andriamanitry ny famonjena anay!
angony izahay ary tsoahy avy eo amin'ny firenena,
mba hankalazanay ny anaranao masina
sy hanaovanay ho reharehanay ny fiderana anao.
36Isaorana anie Iaveh Andriamanitr'Israely,
Hatramin'ny mandrakizay, ka ho mandrakizay.
Ary ny vahoaka rehetra nanao hoe: Amena! sy hoe: Midera an'ny Tompo!
37Dia navelan'i Davida teo anoloan'ny fiaran'ny faneken'ny Tompo Asafa mbamin'ireo rahalahiny, mba hanao tsy tapaka ny fanompoana eo anoloan'ny fiara, araka ny anjara raharahany isan'andro. 38Toy izany koa Obededoma mbamin'ireo rahalahiny valo amby enimpolo, Obededoma zanak'Iditona ary Hosa, ho mpiandry varavarana. 39Toy izany koa Sadaoka mpisorona, mbamin'ireo mpisorona rahalahiny, teo anoloan'ny Fonenan'ny Tompo teo amin'ny fitoerana avo tao Gabaona, 40mba hanolotra sorona dorana tsy tapaka, maraina sy hariva, amin'ny Tompo, eo anoloan'ny otely fanaovan-tsorona dorana, sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Tompo izay nandidiany an'Israely. 41Teo akaikin'ireo Hemàna sy Iditona mbamin'ny sisan'ireo voafidy sy voatonona anarana, hidera an'ny Tompo, fa maharitra mandrakizay ny famindram-pony. 42Niaraka tamin'ireo, dia niaraka tamin'i Hemàna sy Iditona, dia nisy anjomara aman-kipantsona ho an'ireo tsy maintsy mampaneno azy, mbamin'ny zava-maneno hampiarahina amin'ny hiran'Andriamanitra. Ny zanak'Iditona niadidy ny varavarana.
43Samy nody tany an-tranony avy ny vahoaka rehetra, ary Davida koa nody hitso-drano ny ankohonany. >